एए गैलरी | AASRAW स्टेरॉयड कच्चे
/ब्लग/"ग्यालरी" को लागि श्रेणी अभिलेख
Reddit र Quora बाट: १२ प्रश्नहरु (तातो बहस) NMN को बारे मा
।। मा लेखियो ग्यालरी .
NMN पाउडर के हो? NAD+ NMN सँग के गर्ने? NMN पाउडर सुरक्षित पूरक हो? के लाभ NMN पाउडर मेरो शरीर लाई ल्याउन सक्छ? के म खाना बाट विरोधी बुढेसकाल सम्म पर्याप्त NMN पाउन सक्छु? NMN पाउडर कसरी लिने? के मैले NMN सँगै अन्य पूरकहरु लिनु पर्छ? के विरुद्ध NMN राम्रो सहयोगी छ […]
शीर्ष Drug औषधिहरू फेफडा क्यान्सरको उपचारका लागि - एफडीएद्वारा स्वीकृत
फोक्सो क्यान्सर के हो? फेफडाको क्यान्सरका प्रकारहरू के हुन्? तपाईलाई फोक्सोको क्यान्सर हुँदा लक्षणहरू के हुन्? म फेला परेको क्यान्सर छ वा कसरी थाहा पाउन सक्छु? मेरो फोक्सोको क्यान्सरको अवस्था के हो? मलाई किन फेफोको क्यान्सर छ? तपाईंको फेफोको क्यान्सरको कसरी उपचार गर्ने? फोक्सो क्यान्सर के हो? क्यान्सरले […]
सुनीतिनिब मालेटको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू 丨 AASraw
सुनीतिनिब मालाट अवलोकन हामी केका लागि सुनीतिनिब मालेट प्रयोग गर्न सक्छौं? सुनीतिनिब मलेटले कसरी काम गर्दछ? कसरी सुनीतिनिब मालेट लिने? कसरी सुनीतिनिब मालेट भण्डारण गर्ने? सुनीतिनिब मालेटका दुष्प्रभावहरू हामी कति जान्दछौं? अरु कुन औषधिले सुनीतिनिब मालेटलाई असर गर्छ? एफडीएले सुनीतिनिब मालेटलाई रेनल सेल कार्सिनोमाको एडजुभन्ट उपचारको रूपमा अनुमोदन गर्‍यो जहाँ […]
स्तन क्यान्सरको उपचार गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी औषधि के हो?
ब्रेस्ट क्यान्सरको बारेमा हामीलाई कति थाहा छ? क्लिनिकल नतिजा एफडीए स्वीकृति द्वारा Neratinib के हो? कसलाई Neratinib आवश्यक छ? कसरी थाहा पाउने कि नेराटिनिब तपाईंको लागि सही छ कि छैन? Neratinib कसरी काम गर्दछ? हामी नेराटानिब कसरी लिन्छौं? हामी नेराटानिबको साइड इफेक्ट के देख्न सक्छौं? निष्कर्ष स्तन स्तनको क्यान्सरको बारेमा हामीलाई कति थाहा छ? स्तन […]
एन्टी-क्यान्सर ड्रग्स अकालाब्रुटनिब: सीएलएल / एसएलएल / एमसीएलको लागि उपचार
Acalabrutinib Backgroud Acalabrutinib समीक्षा Acalabrutinib उपचार (को लागी) Acalabrutinib कार्य को तंत्र के Acalabrutinib को सम्भावित साइड इफेक्ट के हुन सक्छ? Acalabrutinib VS Ibrutinib अनुसन्धान: Acalabrutinib दीर्घकालीन लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया (सीएलएल) को उपचार मा Acalabrutinib आजको दिन बी, All, Myelofibrosis, डिम्बग्रंथि क्यान्सर, बहु myeloma, र Hodgh… को उपचार अध्ययन परीक्षण मा प्रयोग गरिएको छ।